Ngo izinyane abasebasha kungenzeka eziningi izinkinga ezahlukene. Omunye wabo - kwefulethi. Indlela ukubhekana kangcono nale nkinga lingamlimazanga impilo yengane ngesikhathi esifanayo?
izinyawo Flat - a ukusonteka of unyawo lomuntu, okuyinto, isimiso, ukungakhululeki kakhulu ngokuvamile akusebenzi. Kuyaphawuleka ukuthi izingane ezingaphansi kweminyaka engu-inkinga eziyisikhombisa enjalo alikho, ngoba ngalesi sikhathi ngokuvamile sihamba sonke ngemindeni ngokwayo: wokudamba flat, normalizes umsebenzi unyawo. Nokho, ngisho lezo zifo isilinganiso kahle lokufeza izifundo ezithile nengane zanoma iyiphi iminyaka. Excellent usizo Physiotherapy - umzimba sezinyawo flat. By endleleni, lokhu kuyindlela ephumelela kunazo kulwiwe nale nkinga.
Yiziphi ukuqeqeshwa kungaba kuqukathe yokuzijwayeza Yiqiniso? Nge izinyawo flat kuzosiza isinyathelo esilandelayo umzimba. Okokuqala, umntwana kudingeka unikeze ibhodlela, ibhola elincane noma izikhonkwane. Iyoba sisusa ngezinyawo le ndaba. owokuqala ke omunye.
Isivivinyo esilandelayo. Ukuze wenze lokhu, umntwana ahlale phansi, agobe imilenze nezinyawo ayizicaba baba phansi. Ngaphansi eside ingane izinyawo, kubalulekile ukubeka ithawula, yena ngosizo tintwane takho kufanele udonse amabhodlela ngaphansi. It kungavunyelwe ukuthatha unyawo lakho phansi. Okokuqala, inqubo kwenziwa ngemlente munye, khona-ke elinye.
Okulandelayo umsebenzi umsebenzi yokwelapha Yiqiniso ngezinyawo flat. Ingane kumele qondanisa emadolweni akhe, ehlezi welulele isithupha sakho ukubamba emlenzeni owodwa ukuthi siphakamise olunye unyawo bebheke unyawo kwamadolo. Lezi imivimbo kufanele liphindwe izikhathi 3-4 emlenzeni ngamunye.
Yini enye kuhilela elashwe ngokomzimba ngoba izinyawo flat? Ukuze umsebenzi olandelayo Uzodinga elincane imininingwane - izibaya zokubhalela, amapensela. Badinga bendlala phansi, futhi ingane ukuqoqa wonke izinzwane futhi lasakazekela yinqwaba ezahlukene. Inqubo lokufeza eyodwa bese umlenze wesibili.
Khona-ke nje nempela kufanele uzibekele ngosizo izinyawo! Ingane phakathi kweminwe ukubamba ipeni, futhi kufanele udwebe sibalo ezihlongozwayo kuye. Ungakwazi ukuhlela ngisho umncintiswano, lokho oyokufeza foot kangcono.
usizo Excellent elandelayo umsebenzi umsebenzi yokwelapha sezinyawo flat ezinganeni: ingane kufanele ahlale phansi futhi ukuguqa yakho. Manje iminwe unyawo ukwenza ukunyakaza isibungu: clenching futhi unclenching izinzwane ukuze siqhubekele phambili kancane. Uma izingane eziningana, ungahlela ngisho siqala kumnandi!
Ukusebenzisa elandelayo futhi kwenziwa awulutho kuNkulunkulu. Kid kumele buhlanjululwe ngamadolo ocindezelwe ndawonye izinyawo. Ngokulandelayo, kudingeka ngiqondiswe imilenze yakhe ukuze stop ayikashintshi.
Yini enye kuhilela elashwe ngokomzimba ngoba izinyawo flat? Ukuzivocavoca okufanele nhlobonhlobo. Okulandelayo: ingane uyohlala ngiqondiswe imilenze yakho, izinyawo akudingayo nje ukuchaza ukunyakaza isiyingi.
Yini enye ongayenza? Ingane kumele uhlale phansi, ukuguqa yakho nezinzwane uthinte phansi kuphela, enza ukunyakaza efana nokushaya.
Ukusebenzisa lokugcina umzabalazo eziyinkimbinkimbi nge flat: umntwana kudingeka kuphela abazifaka izithende zakhe.
Yiziphi amakhambi abantu-high blood pressure?
Lacha Lake: ngokudoba, ukuzingela kanye zokungcebeleka izindawo
Devid Gerbert Lourens. biography
Izikweletu zomphakathi lamazwe emhlabeni. Usezingeni lamazwe ezingeni debt umphakathi
Indlela yokulahlekelwa isisindo emavikini amabili?
Concept, izinhlobo, ukubaluleka, izibonelo kokukwazi. inkinga yokufunda ukufunda nokubhala. Ukwakhiwa kokukwazi. Ukukhulisa amazinga okufunda ukufunda nokubhala. Literacy - lena ...
Jonathan - apula ukuthi wonke umuntu othanda!